Telegram ma ọ bụ WhatsApp: Gịnị kpatara TG nke Linuxeros ji ahọrọ App? | Site na Linux
Telegram ma ọ bụ WhatsApp: Gini mere TG ji ahọrọ App maka ndị ọrụ Linux?
N'ihi na anyị hụrụ Free Software, Mepee Isi mmalite na GNU / Linux, o doro anya na mgbe ọ na-eji Telegram (TG) ma ọ bụ WhatsApp (WA)Anyị na-ahọrọ nke mbụ tupu nke abụọ, iji soro ndị ọrụ ibe anyị nwere ụdị obi nwee nkwukọrịta, ma kesaa ma ọ bụ gbasaa agụụ anyị maka mpaghara ihe ọmụma a na ndị ọzọ.
Ma kpọmkwem Kedu ihe kpatara Telegram ji ahọrọ ngwa ngwa maka ndị ọrụ Linux?
Tupu anyị agaa n ’ihe niile kpatara ya na ebumnobi ya, na ịghara ime ka akwụkwọ a buru ibu, anyị na-agba gị ume inyocha akwụkwọ anyị gara aga na telegram, nke ọtụtụ ndị na-ewere dị ka nke ka ya mma WhatsApp, n'agbanyeghị ma ha bụ Linuxeros ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ebe ọ bụ, ugbu a telegram maka nke ya mgbanwe dị ukwuu y na-eto eto na oru ohuru, a na-ejiwanye ya arụ ọrụ na ngalaba dịka ahia nke ngwaahịa, ngwongwo na oru, ọdịnala na ọdịnala (dijitalụ).
Telegram: Akụkọ, ọrụ na uru ruo ugbu a
Telegram: Na-ekwuwapụta na o ruru narị nde ndị ọrụ anọ
"Telegram bụ gịA ngwa na nche lekwasịrị anya ozi ngwa bụ ibu ngwa-ngwa, mfe na free. Nwere ike iji Telegram na ngwaọrụ gị niile n'otu oge. Ejiri mmekọrịta gị na ozi gị site na ekwentị gị, mbadamba ma ọ bụ PC". Kedu ihe bụ Telegram?
1 Telegram: Linuxeros 'họọrọ izi ozi ngwa
1.1 Linuxe ihe mere amasị Telegram
1.2 Ihe ndị ọzọ kpatara ya
Telegram: Linuxeros 'họọrọ izi ozi ngwa
Mụ onwe m na-eji telegram ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile, ebe ọ bụ na, dị ka ọtụtụ ndị jiri ya, echere m nke ahụ telegram osobo niile kacha nta dị mkpa na ndị ọzọ, ka ihu ọma na-eji ya dị ka ngwa ngwa naanị. Agbanyeghị, anyị amaraworị na isi asọpụrụ ebe a iji mezuo ebumnuche a bụ na ezinụlọ anyị, ndị enyi anyị, ụmụ akwụkwọ ibe anyị ma ọ bụ ọrụ anyị, ndị ahịa anyị ma ọ bụ ndị ahịa anyị, ikwaghari Ọzọkwa na- telegram.
Banyere isi ihe a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ ikpo okwu, ọtụtụ n'ime anyị ahụla na akụkọ banyere telegram, na otu nọ na-eto eto mgbe niile nke ndị ọrụ ya. Na ọtụtụ ndị gụnyere m, anyị enweela ike ịhụ etu ndị anyị na-akpọ, Linuxeros ma ọ bụ na ha abụghị, sonye na ikpo okwu oge ọ bụla enwere oke ọdịda na ọrụ zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ na ọ bụ ìhè ebipụta a ọhụrụ njikere banyere a enweghị ike, ọdịda ma ọ bụ omume ezighi ezi nche, nzuzo ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Linuxe ihe mere amasị Telegram
Na nkenke na iji dị mkpa, site na m si ele ihe anya dị ka linuxero, Echere m na ndị a bụ ihe nkịtị na ihe niile mere anyị ji ahọrọ Telegram iji dochie WhatsApp:
Ọ nwere onye ahịa na-emepe emepe na-emeghe n'efu ma na-emeghe, nke na-erepịakwa obere akụrụngwa ngwanrọ (RAM / CPU) na obere batrị, na akụrụngwa na ngwaọrụ ebe arụnyere ya ma gbuo ya.
Ọ na-enye nkwa dị ukwuu na arụmọrụ teknụzụ nke nchekwa, nzuzo na amaghị aha.
Existencedị adị nke Otu, Supergroups na Channels nke na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịrụ ọrụ na obodo ma debe onwe anyị ngwa ngwa.
Nnweta nke Telegraph ngwá ọrụ, iji mepụta isiokwu (ozi ogologo / ogologo) ma kwado izipu ha na nlele ha (nlele ngwa ngwa) site na nkata ma ọ bụ ọwa.
Onyinye buru ibu nke bots juputara na oru na ike iji mezuo oru, ma ihe omuma, imeru ihe nke ndi otu na ndi oru, ma obu nkwado (ntughari ederede, ntughari okwu na ederede, njikwa ozi, na ndi ozo).
Ike dị ukwuu nke sistemụ nyocha ya, nke enwere ike iji maka ihe niile, site na ikpebi ihe Distro, Desktọpụ Environment, Window Manager, ma ọ bụ ihe ọzọ Linuxero, iji nye echiche ma ọ bụ ịhazi onwe anyị, na-eji ọtụtụ ohere nke ụdị atọ dị ugbu a Nyocha.
Otu dị iche iche dị iche iche dị iche iche, Supergroups na Channels haziri nke ọma site Linuxeras Gburugburu, ọtụtụ n'ime ha sitere na weebụsaịtị ma ọ bụ ndị amaara ama, dị ka Blog, yana ọwa anyị nke Telegram site na DesdeLinux.
Ihe ndị ọzọ kpatara ya
N’ezie, anyị ga-enwerịrị ọtụtụ ihe kpatara ya, dịka iji ya ma ọ bụ na ọ bụghị iji akwụkwọ mmado (static na animated), nchịkọta akụkọ foto gị, ọkpọ vidiyo, ihe nchọgharị weebụ agbakwunyere, n'etiti ndị ọzọ, mana m chere na ndị a Ihe 7 ndị a kpọtụrụ aha n’elu bụ ndị kacha mkpa ịhọrọ Linuxeros na Telegram, tupu WhatsApp.
Cheta, mgbe ọ bụla ị chọrọ ịmatakwu banyere Telegram na Spanish, can nwere ike ịkpọtụrụ onye ahụ ngalaba ajụjụ ngalaba na Spanish, onye nwere websaịtị gị. Na na Bekee, ị nwere ike ịlele oge gị blog inwe ozi ọzọ ruo ụbọchị ma ọ bụ gị ngalaba evolushọn ka ọ dị ọhụrụ na mmepe ya.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ihe kpatara ya «¿Por qúe Telegram es la Aplicación de Mensajería preferida de los Linuxeros», na ọdịnala, azụmahịa na nke a na-ejikarị WhatsApp, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Maka ozi ndị ọzọ, egbula oge ọ bụla ịga leta nke ọ bụla Ọbá akwụkwọ dị n'ịntanetị dị ka OpenLibra y JEDIT ịgụ akwụkwọ (PDFs) n'isiokwu a ma ọ bụ ndị ọzọ ihe omuma. Maka ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ nke a «publicación», akwụsịna ịkekọrịta ya ya na ndi ozo, n'ime gi Ebe nrụọrụ weebụ kachasị amasị, ọwa, otu, ma ọ bụ obodo nke netwọk mmekọrịta, ọkacha mma n'efu ma mepee Mastodon, ma ọ bụ nchebe na nzuzo dị ka TG.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Telegram ma ọ bụ WhatsApp: Gini mere TG ji ahọrọ App maka ndị ọrụ Linux?
telegramm ngwa herunterladen: telegramm.app/download
Versiondị ọhụrụ nke ndị ọkwọ ụgbọ ala AMD Radeon 20.30 dị ugbu a
BerryWM, Blackbox, BSPWM, Byobu na Compiz: WM ndị ọzọ maka Linux